ချစ်စံအိမ်: World War II Memorial သို့ .....
World War II Memorial သို့ .....
ကဲဒီတခါ လမင်းသွားတဲ့နေရာလေးဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဘလော့မောင်နှမတို့အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။။ ဓာတ်ပုံတင်ရင်ရာဇ၀င်အကြောင်းလေးပါသိသလောက်လေးရေးပေးထားပါတယ်။။ လိုအပ်တာနဲ့လွဲခဲ့တာများရှိရင် လမင်းမှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။။
မြို့ထဲစ၀င်ပါပြီ ....ကားထဲကရိုက်လိုက်တာဆိုတော့ာဘာလည်းသိဘူးး :)
W0rld War II Memorial ကို May (29) 2004 စတင်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။။။ အခုဆို (8) နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့။။
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ မြန်မာလည်းပါတော့ တွေ့ တာနဲ့ ရိုက်ခဲ့၏
သူတို့ရိုက်တာတွေ့ တော့ကိုယ်လည်းရိုက်ချင်တာပေါ့ ဓာတ်ပုံပြောတာနော်..:D
အရင်တစ်ခါအဖြူကိုလှမ်းတွေ့ လို့ ဘာလည်းမသိဘူးဆိုတာကို မကျေပွဲသွားခဲ့တာပါ။။။ Martin Luther King သူနာမည်နော် သူက လူမဲတွေရဲ့ အခွင့်အရေးရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာပေါ့။။ မြန်မာပြည်လိုဆို ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်လိုမျိုးပေါ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတွေရခဲ့တယ်။။ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့လုပ်ကြံခံရပြီသေသွားရရှာတယ်။။။
ခန့်ညာစွာရုပ်တုပါ.. Washington DC မှာတည်ရှိပြီ စတင်ဖွင့်ခဲ့တာကတော့ August (22. 2011) မှာဖွင့်ခဲ့တာပါ ပထမဆုံးရောက်ခဲ့ရှိခဲ့တာပါ။။
သူမွေးနေ့က January 15. 1929 အသက်ခံရတာက April 4.1968 အသက်က 39 ပဲနေရရှာတယ်:( လမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်လည်း ၃၂ ပဲနေရရှာတယ်နော် အများအတွက်လုပ်တဲ့သူတွေ တော်ကြတတ်တဲ့သူတွေအသက်တိုကြတယ် ထင်တယ်။။ :P
အဝေးကနဲ့လှမ်ရိုက်လိုက်တာ Jefferson memorial .ပါ..
ဒါကတော့ကိုရီးယား Memorial ပါ ကိုရီးယားစစ်ဖြစ်တော့ အမေရိကန်တွေသွားကူလို့ ကျဆုံးခဲ့တဲ့စစ်သားတွေအတွက် အမှတ်တရပေါ့။။။ အမေရိကန်တွေကသဘောကောင်းတယ် ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာစစ်ဖြစ်ကြ သွားကူကြတာ လူတွေငွေတွေကုန်လိုက် တာသောက်သောက်လဲပဲ အခုတော့အကြွေးတွေဝိုင်လို့ပေါ့:P
တွေ့ ပြန်ပြီ သားသားမီးမီးလေးတွေ ဟီး
နေ၀င်ချိန်ဆိုတော့ အမြန်ရိုက်လိုက်တာ အိမ်ပြန်နောက်ကျနေပြီ။။။ မြို့ ထဲဆိုတော့လည်းတွေ့ တာရိုက်ခဲ့ပါတယ်။။။ ပြန်ပါပြီ နေ၀င်အလှကားထဲကရိုက်လိုက်တာ အိမ်ရောက်တော့ တော်တော်ကိုမိုးချုပ်နေပါပြီ။။ ဗိုက်ဆာလိုက်တာလွန်ပါရော အပြင်စာမစားတတ်တော့ ခက်တာပေါ့ ဟီး တမျိုးမထင်နဲ့နော်ဈေးကြီးလို့ :P လမင်းဘယ်သွားသွားဘလော့သူငယ်ချင်းတွေတော့သတိတရအမြဲသွားတတ်တဲ့နေရာမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်နေတဲ့နေရာလေးတင်ပေးတော့ ဗဟုသုတလည်းရရောက်ဖူးသလိုမျိုးခံစားရတာပေါ့။။ လမင်းကတော့မြန်မာပြည်အနှံလျှောက်သွားချင်ပါတယ်။။ အရမ်းလည်းလွမ်းလှပါပြီ မြန်မာပြည်လည်းအမြန်ပြန်ချင်နေပါပြီ..:(
Posted by ချစ်စံအိမ် at 2:24 PM
မိုးသူ(တောင်ကြီး) April 30, 2012 at 6:45 PM
တခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့ နေရာတွေက ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရလို့ 
မောင်ဘုန်း April 30, 2012 at 7:24 PM
အခုလို လေ့လာခွင့်ရတဲ့တွက် .... ကျေးဇူး ပါဗျာ .....
မြတ်ကြည် April 30, 2012 at 9:28 PM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် April 30, 2012 at 10:08 PM
အောင်အောင် April 30, 2012 at 10:30 PM
မမရေ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်သွားတယ်နော်...
အလွမ်းမြို့ May 1, 2012 at 12:08 AM
ရင်ဆူး May 1, 2012 at 1:43 AM
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) May 1, 2012 at 2:42 AM
(ပုံတွေကြည့်ရရုံနဲ့ အားမရတော့ပါ )
ကြည်ဖြူခင်ခင် May 1, 2012 at 9:13 AM
ခုလို တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ.. ဗဟုသုတရသွားတာပေါ့.. (း
Iora May 1, 2012 at 10:02 AM
ချမ်းမင်းကို(ပဥာက်) May 1, 2012 at 10:05 AM
ဖြိုးဇာနည် May 2, 2012 at 1:47 AM
အရမ်းသဘောကျသွားတယ် ဒါမျိုးလေးတွေဆို အရမ်းသဘောကျတာ
မီးမီးငယ် May 2, 2012 at 1:14 PM